Daal ayaan ku seexanayaa - qoraalo iyo qoraal ah oo daabacan
Daal ayaan ku nasanayaa - qoraallo iyo qoraal
Daal ayaan ku nasanayaa - qoraalka
Dhageysiga heesaha carruurta waa kaalmo dhab ah oo la xaqiijiyay. Saamaynta, waxyaabo kale, waxay ka dhalataa xaqiiqda ah in carruurta yaryar jecel yihiin muusiga. Xitaa cilmi-baaris faahfaahsan oo ku saabsan mawduuca caafimaad-qabka oo soo daahay ayaa cadeeya in caruurtu si fudud ugu nasanayaan nasashada muusikada.
Muusikada iyo sheekooyinka Sheeko ayaan ku nasanayaa
Waalidiintu maaha inay noqdaan khabiiro si ay carruurtoodu u ogaadaan faa'iidooyinka badan ee hindhisooyinka xanaanada marka ay hurdaan. Laakiin si loo hubiyo in garoonku ugu yaraan yahay mid sax ah, waxaa lagugu soo dhaweynayaa inaad daabacdo casriga naqshadeynta ee naqshadeynta ilmaha oo leh qoraallo iyo qoraallada xannaanada carruurta. Carruurta waaweyn ayaa sidoo kale rinji ku dhejin kara caleemaha iyo qoraalka!
Waan daalanahay, seexo,
Xir labada indhoodba:
Aabbow, ka tag indhahaaga
Sariirta iga sariirta!
Miyaan sameeyay qalad maanta,
Ha fiirin, Ilaahayow!
Naxariistaada iyo dhiigga Ciise
Dhammaan wax khatar ah ma qabaan.
Ka fogow nacayb iyo nacayb,
Jacayl iyo naxariis igu jirto.
Ha i eego weynaantaada,
Ilaahow, adigaan isku kaa halleeyaa.
Dhammaan wixii aniga ila xiriira,
Ilaahow, nacasnimada iska daaya,
Dadka oo dhan, weyn iyo yar,
Haddii laguu amro.
Xusuusin ka timid heestii carruurteyda Daal ayaan ahay oo waxaan ku nasanayaa sida feylka furan
Fikradda cayaarta dhalashada maalinta dhalashada Yaan ahay
Waxaan raacaa faankayga - qoraallada iyo qoraalka
Luuqadaha ajnebiga ee isgaarsiinta
Qodobbo ku saabsan baabtiiska
Sidee baan u xoojiyaa kalsoonida carruurta?
Ka soo baxaya ilmahaaga - Sideen u dhaqmaa?